CBD iyo Sonkorowga - Isku -dheelitirka Sonkorta Dhiigga | Ugu Fiican 2020
CBD iyo Sonkorowga - Isticmaalka Saliidda CBD si loo dheellitiro Sonkorta Dhiigga | Waxsoosaarka ugu fiican 2021
CBD iyo Sonkorowga: Adeegsiga Saliidda CBD si loo dheellitiro Sokorta Dhiigga
Nidaamka cannabinoid wuxuu la xiriiraa sonkorta dhiigga
CBD iyo Sonkorowga: Ka -hortagga calaamadaha sonkorowga CBD
Saynisku wuxuu baaray cannabinoids marka loo eego daaweynta astaamaha iyo sababaha sonkorowga. Joogtaynta nidaamka isku dheelitiran ee guriga ayaa u muuqda inay fure u tahay daaweynta cusub ee cudurkan oo ku saleysan xeryaha cannabis Sativa. In kasta oo aan weli daawo loo helin, astaamaha qaarkood ayaa lagu yareyn karaa ubaxyada hemp iyo soosaarka.
Sonkorowgu waa cuduro dheef -shiid kiimikaad ah oo ay sababeen jirku oo aan awoodin inuu xakameeyo xaddiga sonkorta, gaar ahaan gulukooska, dhiigga. Heerarka gulukooska waxaa nidaamiya hormoonno sida insulin, oo laga soo saaro beeryarada. Sonkorowgu wuxuu sababi karaa dhibaatooyin muddo dheer soconaya, sida cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, faalig, ama waxyeello u geysata kelyaha iyo indhaha.
Sanadihii la soo dhaafay, daraasado aad iyo aad u badan ayaa xaqiijinaya caddeyn qotodheer oo ay bixiyeen dadka sonkorowga qaba taas ayaana muujineysa CBD saliidda waxay leedahay saamayn waxtar leh. Astaamaha ka-hortagga bararka ee CBD iyo sidoo kale THC, waxay yareeyaan bararka halbowlaha, oo ah calaamad aad ugu badan sonkorowga, halka saamaynteeda neeroprotective-ku ay yareyso caabuqa dareemayaasha iyo xanuunka.
Cannabinoids sidoo kale waxay u dhaqmaan sidii vasodilators, taas oo hagaajisa wareegga dhiigga waxayna ku shaqeysaa antispasmodic shaqo muruqyada iyo nidaamka caloosha. Xanuunka lugaha aan xasilloonayn ee uu sababay sonkorowga ayaa sidoo kale lagu yareyn karaa xashiishadda, taasoo ka dhigaysa bukaannada hurdo fiican. Daraasadihii shaybaarka ee dhowaa waxay muujiyeen in nidaamka endocannabinoid uu mas'uul ka noqon karo xasilinta heerka sonkorta dhiigga, oo ah dhibaatada ugu weyn ee cudurkan. Nasiib darro, waxay yihiin oo kaliya cilmi -baaris shaybaar; hadda ma jiro daweyn ku saleysan cannabinoid oo loogu talagalay sonkorowga.
Inkasta oo cilmi-baaris caafimaad oo lala yeesho bini'aadamka loo baahan yahay, tijaabooyinka shaybaarka ayaa muujiyay in uu jiro xiriir xooggan oo u dhexeeya sonkorowga iyo cannabinoids.
ka iibso stromectol guud online https://blackmenheal.org/wp-content/languages/new/buygeneric/stromectol.html ma jiro warqad dhakhtar
Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarisyada qaarkood oo muujinaya saameynta nidaamka endocannabinoid ee sonkorowga ayaa la sameeyay, waxayna gaareen gunaanad sida cannabidiol wuxuu yareeyaa dhacdooyinka xanuunka macaanka ee jiirarka aan buurnayn ee macaanka. Sida laga soo xigtay cilmi-baarisyada qaarkood, CBD waxay joojisaa oo dib u dhigtaa insulitis-ka wax burburiya iyo soo saarista cytokines bararka, taasoo keentay hoos u dhac ku yimaada xanuunka macaanka.
Cilmi-baarayaasha qaarkood waxay sidoo kale ka hadlaan habka suurtagalka ah ee is-beddelka difaaca kaas oo ay kiciso CBD. Mala-awaalkan waxaa lagu xaqiijiyay cilmi-baarisyo kale oo ku saabsan cannabidiol iyo cilmi-baaris lagu ogaaday saameynta neuroprotective ee CBD ee qaabka tijaabada ah ee sonkorowga.
online ka iibso ivermectin generic https://blackmenheal.org/wp-content/languages/new/buygeneric/ivermectin.html ma jiro warqad dhakhtar
Cilmi-baaris kale ayaa sidoo kale lagu ogaaday in CBD ay hoos u dhigto cilladda wadnaha ee jiirarka ee leh wadnaha wadnaha ee sonkorowga.
ka iibso zithromax generic online https://blackmenheal.org/wp-content/languages/new/buygeneric/zithromax.html ma jiro warqad dhakhtar
Sheybaarrada ka baxsan iyo guriga dadka qaba sonkorowga, waxaan ka helnaa dhammaan cadaymaha anecdotal -ka ah in cannabinoids ay wax ku ool u yihiin daaweynta cudurrada indhaha, xanuunka daba -dheeraada, xanuunka hurdada, iyo cudurrada kale ee la xiriira sonkorowga. Sida loola dhaqmo bukaanka sonkorowga wuxuu kaloo ku xiran yahay inay qabaan dhibaatooyin kale iyo caafimaadkooda guud. Bukaanjiifka qaar ayaa kaabaya dawooyinkooda cannabinoid.
Haddii aad tahay isticmaale CBD iyo cudurka macaanka qaba, waa inaad ogaataa inay kicin karto rabitaankaaga marka hore, laakiin mustaqbalka fog, waxay leedahay saamayn ka soo horjeedda waxayna ka ilaalin kartaa cayilka. Soosaarka xashiishadda oo leh heerar kala duwan oo THC ah, CBD, iyo cannabinoids kale iyo terpenes, ama CBD kaliya, ayaa loo malaynayaa inay waxtar u leeyihiin caafimaadka halbowlaha iyo wadnaha.
Xashiishadan isku midka ah ama soosaarka hemp ayaa loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo kiriimyada jirka la mariyo ee yareeya xanuunka neuropathic ee inta badan la xiriira sonkorowga. Dhinaca kale, halista suurtagalka ah ee aad la kulmi karto adiga oo isticmaala CBD iyo bukaanka sonkorowga waa hypoglycemia, maadaama laga baqayo in heerarka gulukoosku hoos u dhacaan iyada oo aan bukaanku ogaanin ilaa ay ka daaho.
Dhammaan noocyada jimicsiga oo la sameeyo si joogto ah, oo ay weheliso cunto caafimaad leh oo dheellitiran ayaa yarayn doonta halista sonkorowga waxayna u adeegtaa xakamaynta heerka sonkorta dhiigga dadka qaba cudurkan. Dadka sonkorowga qaba waa inay sidoo kale dhexdhexaadiyaan ama joojiyaan isticmaalka aalkolada iyo tubaakada.
Previouspost Previous:Waa maxay faa'iidooyinka CBD?Nextpost Next:Waa maxay CBD Oil? | Alaabta ugu fiican ee 2021